Miwoga Yurub oo ka soo horjeestey 6 nin oo Somaliland toogasho ku fulisey farriina u diray Muuse Biixi.
November 28, 2020 Xuseen 4
Puntlandtimes (Muqdisho)-Miwodga Yurub ayaa walaac xoogan ka muujiyey tallaabadii ay xukuumadda Somaliland toogashada ugu fulisey 6 nin oo ku eedaysnaa inay falal dil ah horay uga geysteen deegamaada maamulkaasi uu ka arrimiyo, kaasi oo ka soo horjeedey heshiis ay galeen dalalka Midowga Yurub ee EU iyo Madaxda Ergada Norway iyo Boqortooyada Ingiriiska.
“Midowga Yurub wuxuu aad uga xumaaday warka ku saabsan dil toogasho ah oo lagu xukumay 6 maxbuus oo ku xirnaa xabsiga Mandheera, Somaliland, 26kii Nofeembar 2020.” ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Midowga reer Yurub.
Bayaanka ayaa markale lagu yiri,”Midowga Yurub wuxuu hayaa mowqif mabda ‘ah oo ka dhan ah ciqaabta dilka waxayna ka soo horjeedaan adeegsiga ciqaabta dilka xaalad kasta ha noqotee. Ma jirto caddayn adag oo jirta oo muujineysa in ciqaabta dilka ay u adeegsaneyso ka hortag dembi, kana waxtar badan xabsi. Intaas waxaa sii dheer, wixii khaladaad ah – ee aan looga hortegi karin nidaam sharciyeed kasta – waa kuwo aan laga soo kaban karin.”
Miwoga Yurub ayaa sheegay in 50-kii sano ee la soo dhaafay in in ka badan saddex-meelood laba meel oo ka mid ah dalalka adduunka ay noqdeen kuwo baabi’iya sharciga iyo ku dhaqanka, wuxuuna sheegay in midowga Yurub uu sii wadi doono taageeridda isbeddelka guud ee ku wajahan ciribtirka ciqaabta dilka.
adeer Mareykan baa lagu dilaa maalin walba, Europe ha iska hadasho, cidna meeshan wax idiinka weydiin mayso, haddii kale dadka oo dhan qaxooti baanu idiinku soo diri, weliba dambiilayasha
Gaaladaan quraafaad ayey wadaan. Sharcigoodu waxuu u hiiliyaa oo xaquuq siiyaa qaatilka. Dulmanuhu xagooda xaquuq kuma leh.
Sida ayna Midowga Yurub ubpgoleyn in iyagaba loo sheego waxa shuruucdooda ka khaldan oo teena Islaamka ah afka kaga qoryo qoryeyno ayaynaan inana u aqbali karin iney tooda guracan noogu buunbuuniyaan.
Kkkkkk Somaali xukunka dilka ah laga mamnuuncay waxay uga dhigan tahay Soomaali la siiyay liisan uu wax ku dilo. Kkkk Mid kastoo waxma garato ahi intuu dhowr uu neceb yahay iska dilo ayuu bariis bilaash ab soo daanan lahaa. Kkkk
Malaha waxa wacnaan laheyd in aynu dhisno jeel weyn oo JEELUL KHAATILIIN loo bixiyo. Halkaasna lagu guro inta wax disha oo dhan. Dabadeedna Yurubiyanka lagu yidhaa idinku quudiya. Dabadeedna kolka aad is tidhaahdaan wey dhameysteen wakhtigii ciqaab ugu filneyd idinku qaata oo ka tuura meeshaad rabtaan anaga wey naga dhinteene. Kkkkk
It is time to tell the Euripeans to either leave us alone or respect our laws. Go tell the U.S. to get rid of the Death Penalty.
@ Ahmed Shiine.
Sxb gudoon salaan sare waxaan kuu rajeynayaa Wanaag iyo khayr inshalah marwalba.
HADEE Waa Halkii Dhabayscada’e,kkk,
Waxay ila tahay Gaalo Qudhun weyn Ayaa u baahan in waxan ay ku hadaaqaan ee afka baarkiisa ah Human Rights loo sheego in ay aad ugu liitaan weliba umad baabis weeye toodu,
Laakin tooda indhaha ayay ka laliyaan iyagoo og dhibaatada ay gaaladu iyo munaafaqada ay kuwa nool yihiin xitaa kooga wax fahma ama runta dadka u sheega waa la khaarajiyaa si cilmiyeysan sida wuu is dilay iyo wuu waashay kadibna sidaa looga takhaluso.
Gaaladu waxay markaa indhaha dadkoodii kaga duwaan caalamka muslimiinta ama dowladaha Taagta Daran ee DUNIDA 3AA, the 3th World.
waayo waa kaadh ay marsan karaan maadama ay xoogaa luflufa u tuuraan sidaana dadkoodii ay bahdileen ugu sheekeeyaan waxan ilaalineynaa Human Rights iyo badha badha iyo bla bla.
Niman gaalo oo aan wada shaqayn jirney aadna u kaftami jirney ayaa suaal waydiiyey waxa ay ahayd ii sheeg qof diin haysan oo dhaqan lahayn oo waxwalba oo xun caadi u arka waxa uu ka fahmi karo waxa wanaagsan.
Wuu ku haftay si cad ayuuna iigu sheegay in diintoodii iyo dhaqankoodiiba laga tirtiray oo la baabiyey lagana dhigay xoolo aan fakarin wixii loo sheego keliya qaata.
Waynu ognahay dhaqama foosha xun ee dhulka Gaalada yaala markaa yaan dhaq jalaq loo siin nacnacdooda.